Daawo: Cabdiwali Gaas oo dhaqaale ka badan midkii S.land Qaadatay, doonaya inuu ku Wareejiyo Dekedda Boosaaso MUUQAAL!! | kowtharmedia.com
Home HORUMARKA DALKA Daawo: Cabdiwali Gaas oo dhaqaale ka badan midkii S.land Qaadatay, doonaya inuu ku Wareejiyo Dekedda Boosaaso MUUQAAL!!
Daawo: Cabdiwali Gaas oo dhaqaale ka badan midkii S.land Qaadatay, doonaya inuu ku Wareejiyo Dekedda Boosaaso MUUQAAL!!
Mar 01, 2017HORUMARKA DALKA, MAQAALO, MUUQAAL
Warbixin Sir ah oo laga helay Madaxwaynaha Maamulka Puntland C.wali gaas oona la sheegay inuu mudo 1 sanad soo Waday Qorshe uu Shirkada DP World ee dalka Imaaraadka Doonaya inuu ugu Wareejiyo Dekedda magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Wadahadalo mudo u socday Imaaraadka iyo C.wali gaas ayaa la sheegay inuu hada yahay mid gabagabo ah, Waxaana la filayaa inay labada dhinac kala Saxeexdaan Heshiis Rasmiya, Iyadoo Imaaraadku uu doonayo inuu la wareego Maamulka Dedkada Boosaaso, Iyadoo ay horay ula wareegeen Dekedda magaalada Berbera Imaaraadka ayaa Doonaaya inuu Hoos udhigyo Miiqaamka Dekaddaha Soomaalida.
waxa uuna weerar kuhaayaa Dekaddaha muhiimka oo caalamka kusoo xeran karaan, waxaana ee doonayaan inay Dakadha Soomaaaliya ka dhigaan goobo aan amaankooda sugnay oo lagu gubi karaayo Maraakiibta caalamka si ee usii shidnaata Dakada Imaaraadka.
C.wali Gaas ayaa la sheegay inuu Heshiiskan ku qaadan Doonon 15-Milyan oo ka Madaxbanaan Dawladda, Waxaana sidoo kale Suuro gal ah inaan heshiiskan la horgayn Baarlamaanka.
Imaaraadka ayaa doonaya inay Gacanta ku dhigaan Ilaha Dhaqaalle ee Soomaaliya, Sidoo kalana waxaa Jirta Qorshe ay ku doonayaan inay Turkiga uga saaraan Soomaaliya, si ay gacanta ugu Dhigaan Dekedda magaalada Muqdisho.
Previous PostDHEGAYSO: Cod sir ah oo laga duubay Siyaasiyiinta Beesha Habar-jeclo iyo Wiilka uu Sodoga u yahay Siilaanyo!! Next PostWar Deg Deg ah Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta si rasmi ah u ansixiyay Ra’isul wasaaraha Soomaaliya!!